Magaalo Allahu Akbar oo lala qeyliyo la isku tooganayo! | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Magaalo Allahu Akbar oo lala qeyliyo la isku tooganayo!
Magaalo Allahu Akbar oo lala qeyliyo la isku tooganayo!
Posted by: radio himilo October 4, 2017
Venice – Qof kasta oo ku qeyliyay kalmadda Allahu Akbar waa la toogan doonaa, sidaas waxaa yiri maayarka magaalada Venice ee dalka Talyaaniga.
Maayarka katirsan Xisbiga Garabka fog, Luigi Brugnaro, waxaa lagu soo warramay inuu warkan ka sheegay kal-fadhi ka dhacay Rimini kadib weerarkii ka dhacay Barcelona. Wuxuu sheegtay in: qof kasta oo -isaga oo ku sugan St Mark’s Square – ku qeyliya Allahu Akbar, waxaa laga toogan doonaa afarta jihood.
Faaqidista qorshaha ay kaga hortagaan falalka argagaxiso ee ka dhacay Paris, London, Barcelona iyo meelo Yurub kamid ah, wuxuu yiri; “Waxaan u baahannahay inaan sare u qaadno heerka amnigeenna iyo halista argagaxisada. ”
“Waxay sheegaan inay doonayaan inay Ilaahooda la kulmaan: annaguna si toos ah ayaan ugu diraynaa. Uma baahnaa inay buudooyinka iska xooraan. Waan tooganaynaa,” ayuu sii raaciyay.
Maayarka magaalada Florenca, Do Nardella waxaa lagu qasbay inuu raali-gelin bixiyo markii uu shirka kaga dhex qeyliyay Allahu Akbar. Qoraal uu soo dhigay bartiisa ayuu ku raali-geliyay bulshada Muslimiinta. “Uguma tala-gelin inaan diinta ku jeesjeeso.”
Allahu Akbar ama Allaa Weyn, micnaheedu kama dhigna in loo adeegsado ama lagu banneysto dilka dadka aan Muslimiinta ahayn iyo xittaa kuwa Muslimka. Balse sanadihii dhawaa, waxaa soo if baxayay ururro si qaldan uga turjumaya heybadda iyo quruxda Islaamka. Waxayna taasi dadka aan Muslimiinta ahayn ku reebaysaa inaysan ku kalsoonaan ereyada naxariista leh oo ay diinteennu u taagan tahay.
Previous: Barnaamij loo sameeyay ragga doonaya inay xaasas badan guursadaan!
Next: Inter Milan oo Manchester United kula loolamaysa saxiixa Mesut Ozil